MM Abiy: 'Warreen ADWUI wuskii dhugdan lammiilee bishaan dhoobotan jiraachuu hindagatiinaa' - BBC News Afaan Oromoo
Kitaabni Ministirri Muummee Abiy Ahimad barreessaniifi mata duree 'Ida'amuu' jedhu qabu guyyaa har'aa eebbifame irratti MM Abiy Ahimad dhimmoota garaagaraarratti dubbataniiru. kanneen isaan qeeqanif deebii kennaniiru.
Dhimma tokkummaa'uu dhaaba biyya bulchuu, ADWUI, akkasumas dhimmoota ijoo kaan irratti dubbii taasisan.
Jalqaba Kitaaba isaanii shanaffaa ifatti ebbisiisuu isaaniitti gammachuu qabaachuu himan. Kanneen kanaan dura barreesseena keessumaa lameen dhiyeenyarra maxxansiisan nageenya isaaniif yaadoo waan ta'eef maqaa biraa gabaajee maqaa jalqaa ijoollee isaanii sadii fi haadha waarraa isaaniin maxxanfamuu dubbatan.
Waayee Kitaaba isaanii kanaa ibsa dabalataa kennaniiru.
Ida'amuun lammiin Itoophiyaa kamuu kan itti abdatuufi ishee hoogganuu nan danda'a jedhee biyya hundaaf wal qixa taate ijaaruu yaadaa jedhan.
''Ida'amuun biyya kana deebifnee guddoo gochuu qofa osoo hin taane, biyya badhaate goonaa yaada jedhu qabaa'' jedhan.
Kitaabni 'Ida'amuu' Ministira Muummee Abiy Ahimadin barraa'e eebbifame
Obbo Sibihaat Naggaa maal jedhan?
''Hedduun imalli badhaadhinaa Itoophiyaa ni gufata jedhanii yaaaduu'' kana jedhan badhaafamaan Noobeelii Nagaa bara kanaa, wantiin isinii mirkaneessuu barbaadu ''Itoophiyaan badhaatuu taati…Itoophiyaan akka hin badhaane warri barbaadan ni badu malee badhaadhinni ishee hin baduu'' jedhan.
Image copyright Waajira MM
Ida'amuun, hannaan sarara diimaa ittiin jedhaa jedhaniiru haasa'aa isaaniirratti. Sababni ammoo ''biyya keesatti qofa osoo hin ta'iin biyyaa alattis mana tarreessanii, uummataafan yaada jechuun cigoodhaa'' jedhan.
Waayee badhaasa isaanii Noobeelii yoo haasa'an ''ani nama bashaashaa bahe waraqaa ragaa gaariillee kaniin hin arginedha, kun bu'aa keessaniidha, eeguu qabdus'' jedhan.
Dameelee birootiin hoo akkamiin badhaasa Noobeelii Injifanna isa jedhu yaaduu qabnaas jechuun dhaaman.
Waayii walitti baquun paartii haaraa ijaaruu
''Qorannoon dhimma tokkoomuu ADWUI irratti taasifame erga xumurame waggaa tokkoofi walakkaa ta'us nuyi namoonni falaasama Ida'amuun kan amannu mariitin waan amannuuf adda faca'u dhabuf wal kadhachaafi mari'achaa turreerra,'' jedhan.
Ministirri Muummee Abiy 'Ida'amuun' falaasama yoo ta'eefi dhaabichi gara tokkoomutti yoo qajeele walfixuutu dhalata kanneen jedhanif ''walfixuu maaltu fide?'' jedhaniiru.
''Namni paartii tokko ta'uufi ida'amuun kan hin baafne yoo ta'e wuskii isaa lafa kaa'e filmaata biraa 'baay'isuu' jedhu fidee dhufa,'' jechuun dubbatan.
Ibsa tibbanaa dhaaba Tigraay bulchu
Paarkiin Tokkummaa maalfaa of keessaa qaba?
Dhimma tokkoomuu ilaalchisuun MM Abiy yoo dubbatan ''Nuyi miseensonni ADWUI waggoota 30 tokko ta'u dhabnee akkamin Itoophiyaa tokko gochuu dandeenya,'' jechuun kanneen tokkoomuu dhaaba isaanii qeeqan qeeqaniiru.
''ADWUI'n waggoota hedduuf heera mootummaa cabsaa ture'' kan jedhan MM Abiy ''Heerri biyyaa hawaasa siyaasa diinagdee tokko qabu uumna jedhus paartichi ummata tokko gochuu miti ofii isaas tokko ta'u hin dandeenye,'' jedhan.
Kaniin ani jedheen alatti filannoon jiru wal fixuudha kan jedhu yaada moofa'aadha kan jedhan MM Abiy, ''warreen ADWUI wuskii dhugdan sun hadara lammiileen keessan bishaan dheebotan jiruuti hin dagatiina isiniin jedha ida'amuun'' jedhan.
ABBUT kan yaada dhaaba siyaasaa walitti baqsuun ijaaramuti waliigaluu didduun ibsa baasaa tureef deebii kennuu fakkaatu Kanaan MM Abiy Hoteela taa'anii ummata daabbboo beela'een, siif dhaabadheera jechuun oduu duriidha jedhan.
Dargaggootni namoota siyaasaa isnitti qoosaa jirru ofirraa buusaatii biyya keessan eeggadhaas jechuun dhaaman.
''Carraa argatettii osoo hin fayyadamiin, carraan gaafa darbuun carraa dhalootaatti qoosuu hin danda'amus'' jedhan.
''ADWUI akkamitti walitti baqa maqaa akkamiin yaada akkamiin dhufa kan jedhu ani hin murteessu, ani hoogganaa dimookraatawaa waanan ta'eef yaada koo mariifin dhiyeessaa'' jedhan.
Yaada isa fooyyee ta'eefi kan hedduun irratti waliigalan garuu dhiyeenya kana uummataaf ifa goona jedhan.
Haasaa isaanii keessatti MM Abiy waayee Filannoo bara kan gaggeefamuus dubbatanii jiru.
''Filannoon kun kan irratti qoosnu osoo hin taane, yaada qabannee dhiyaannee, yaadicharratti mariyannee yaada filannoo dargaggoon itti guddatu qindaayee kan irratti dorgomnudhaa jedhan.''
Lammiileen Itoophiyaa gonkumaa wal ajjeesuu hin qabnu, yaada qofa maddisiifnee yaada sanarratti walfalmuu qabnaa jedhan.